Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa u sheegay Air France, waan ku jecelnahay!
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Cote d'Ivoire • France Breaking News • Wararka Gambia • Wararka Kenya • Mozambique Breaking News • Wararka Seychelles • Wararka Tansaaniya
Air France waxay siisay wax ka badan calaamad rajo ah Warshadaha Socdaalka iyo Dalxiiska Afrika.
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa ku faraxsan inay wax ka bartaan ballaarinta ay qorsheysay shirkadda duulimaadyada qaranka Faransiiska xilliga jiilaalka.
Shirkadda Air France ayaa si wanaagsan u eegaysa inay ballaariso wacyigelinta Afrika markii shirkadda qaran ee Faransiiska ay soo bandhigtay jadwalka jiilaalka ee 2021/2022.
AIr France waxay ballaarin doontaa shabakadeeda caalamiga ah Zanzibar, Seychelles Maputo iyo Banjul
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa bogaadiyay tallaabadan
Air France, oo loo qaabeeyey sida AIRFRANCE, waa side calanka Faransiiska oo xaruntiisu tahay Tremblay-en-France. Waa qayb hoosaad ka ah Air France –KLM Group iyo xubin aasaase u ah isbahaysiga diyaaradaha caalamiga ah ee SkyTeam.
Iyada oo safarka COVID-19 iyo dalxiiska Afrika ay wali tahay caqabad. Muujinta kalsoonida Air France waxay u muujineysaa Afrika waxay abuuri doontaa kalsooni xagga warshadaha waxaana la rajeynayaa inay ka mid noqoto booqdayaasha imaan kara.
Paris-Banjul oo ku taal Air France
Air France waxay ka bilaabi doontaa adeegga Banjul, Caasimadda Gambia ee Galbeedka Afrika.
Paris- Banjul waxaa lagu hawlgelin doonaa Airbus A330 oo leh 224 kursi. Waxaa ka mid ah 36 boos oo fasalka ganacsiga ah, 21 Dhaqaale oo qaali ah iyo 167 kursi Dhaqaale.
Gambia waa dal yar oo ku yaal Galbeedka Afrika, oo xuduud la leh Senegal, oo leh xeeb Atlantic ah oo cidhiidhi ah. Waxaa caan ku ah hab -nololeedyadeeda kala duwan ee ku xeeran wabiga Gambia. Xayawaanka duurjoogta ah ee ku jira Kiang West National Park iyo Bao Bolong Wetland Reserve waxaa ka mid ah daanyeer, shabeel, hippos, waraabe, iyo shimbiro naadir ah. Caasimadda, Banjul, iyo Serrekunda oo u dhow waxay bixiyaan helitaanka xeebaha. Adeeggu waa inuu bilaabmaa Oktoobar 31.
Sidoo kale waxay ka bilaabmaysaa Oktoobar 31da adeegga cusub ee Air France ee Maputo, Mozambique.
Wadadan cusub ee tagaysa Maputo waxaa lagu hawlgelin doonaa Boeing 777-300ER weyn oo bixinaya Heerka Koowaad, Ganacsiga, Dhaqaalaha Sare, iyo Dhaqaalaha.
Mozambique waa wadan koonfurta Afrika ku yaal oo xeebteeda dheer ee Badweynta Hindiya ay ku yaalaan xeebo caan ah sida Tofo, iyo sidoo kale jardiinooyinka badda. Jasiiradaha loo yaqaan 'Quirimbas Archipelago', oo dhererkeedu dhan yahay 250km oo jasiirado geel ah, mangrove-daboolay Jasiiradda Ibo waxay leedahay burburin xilliyadii gumeysiga ka badbaaday xilligii xukunkii Burtuqiiska. Jasiiradda Bazaruto ee koonfurta fog waxay leedahay reefs kuwaas oo ilaaliya noolaha badda ee dhifka ah oo ay ku jiraan dugongs.
Paris- Abidjan on Air France
AF704 ayaa ka hawlgali doonta inta u dhaxaysa Paris Charles de Gaulle iyada oo sii maraysa Banjul ilaa Abidjan ee Ivory Coast.
Ivory Coast ayaa dhawaan marti gelisay Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube waxayna ku jirtaa koorso ballaarineed oo lagu hormarinayo dalxiiska dalkan Galbeedka Afrika.
Côte d'Ivoire waa dal ku yaal Galbeedka Afrika oo leh goobo lagu nasto xeebaha, kaymaha roobka, iyo dhaxalka gumeysiga Faransiiska. Abidjan, oo ku taal xeebta Atlantika, waa xarunta ugu weyn ee magaalada. Astaamaheeda casriga ah waxaa ka mid ah ziggurat sida, La Pyramide la taaban karo iyo Kaniisadda St. Paul, qaab dhismeedku ku dhegan yahay iskutallaab weyn. Waqooyiga degmada ganacsiga dhexe, Beerta Qaranka Banco waa kaymaha roobka oo leh socod lug ah.
Paris- Zanzibar on Air France
Horeba Oktoobar 18, Air France waxay ku xiri doontaa Paris jasiiradda fasaxa ee Tansaaniya, Zanzibar.
Adeeggan waxaa lagu joogsan doonaa joogsi Nairobi, Kenya ah Boeing 787-9
Dalxiiska Zanzibar waxaa ka mid ah warshadaha dalxiiska iyo saamaynta uu ku yeeshay jasiiradaha Unguja iyo Pemba ee Zanzibar oo ah gobol madax-bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Midowday ee Tanzania
Paris - Seychelles on Air France
Dalxiiska Seychelles horeyba loogu dhawaaqay waana ku faraxsanahay inaan soo dhoweeyo adeegga A330-2200 ee Paris ilaa jannadan dalxiiska Badweynta Hindiya ee ku hadasha Faransiiska iyo Ingiriiska. Adeeggu wuxuu markii hore bilaabmay 2019 waxaana loo joojiyay COVID-19 awgii.
Adeeggan wuxuu bilaaban doonaa Oktoobar 23 -keeda.
Guddiga Dalxiiska Afrika Guddoomiyaha Cuthbert Ncube ayaa sidaa u sheegay eTurboNews, wuxuu aad ugu farxay ballaadhinta shabakadda Air France ee Afrika. Ncube ayaa dareensan in tani ay tahay horumar aad u wanaagsan oo Dalxiiska Afrika uu sugayay.